Hook for car အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : ၂၁၂ရက်​
ချိတ်ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့နဲ့ ဈေးဝယ်လာတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေ၊ ဖိတ်ကျနိုင်တဲ့မုန့်အထုပ်တွေ၊ အိတ်တွေကို လက်က ကိုင်နေစရာမလိုဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချိတ်ထားနိုင်ဖို. ကားအတွင်း ချိတ်လေးကို
Rocket တွင် ဝယ်လို.ရပါပြီ
Product Name,Phone,Addressတုို့ ကို
သို့ (Phone,Message,Viber) တို့ဖြင့်ပေးပို့ မှာယူနိုင်ပါသည်။
?Facebook message ဖြင့်လဲမှာယူနိုင်ပါသည်။?
၁ခု – ၃ထောင်
၂ခု – ၅ထောင်
?ရန်ကုန်မြို.ပြင် – ၂ထောင်ကျပ်
?အမြန်ကြေး – ၂ထောင်
?တခြာမြို့ ကြီးများ-3000 kyats
နယ်စွန်နယ်ဖျား – 4000 kyats
?အမှတ်132၊ ၄လွှာB၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို.နယ်
အမည်: Hook for car